Itinye Man Down Sistemụ / Nchekwa Ọrụ Ọrụ (A10002) | Ngwọta OMG
Onye ọrụ naanị ya bụ onye na-arụ ọrụ a na-eme iche na ndị ọrụ ndị ọzọ na-esoghị ya. Ndị ọrụ dị otú ahụ nwere ike ịnọ n'ihe ize ndụ n'ihi na enweghị onye ga - enyere ha aka. Eziokwu ndị a nwere ike ịghọta ịdị mkpa nke okwu a. Dabere na ụlọ ọrụ data mba ụwa (IDC) 1.3 ijeri mmadụ na-arụ ọrụ n'ime mpaghara ụwa dum na nde 53 bụ naanị ndị ọrụ naanị na USA, Canada, na Europe. Nke a na-ewelite nchekasị nchekwa nke ndị ọrụ a, ihe ndị a na-ahụkarị bụ ndọkpụ ma ọ bụ ọdịda, njem, nkata ụgbọala, ọkụ eletrik, na ikpughe kemịkalụ. Dịka akụkọ banyere nzukọ ndị ọrụ mba ụwa, nde mmadụ isii na-anwụ n'ihi ihe ọghọm ma ọ bụ ọrịa ma ọ bụ nde mmadụ 6300 na-eme kwa afọ.
Na-elele eziokwu ndị a ma ọ bụrụ na anyị hụrụ na òtù dị iche iche, ha na-ejikarị usoro ntuziaka kama ịga maka azịza ọgbara ọhụrụ. Nke mbu, n’isiokwu a, anyị ga-ekwu maka ụzọ eji eme ugbu a, nke abụọ ngwaọrụ nyocha ihe egwu dị na nzukọ ahụ kwesịrị iji ghọta ọkwa nke ihe egwu metụtara ọrụ ụfọdụ karịa ijide nchekwa nke ndị ọrụ naanị site na iji usoro ọhụụ. na-atụ aro teknụzụ ọgbara ọhụrụ nke na-enyere nzukọ aka iwepu nsogbu ndị a.
Ugbu a, kedu ka ụlọ ọrụ ahụ si eme ka nchekwa nke ndị ọrụ naanị:
Ihe Nchebe Onwe Onye (PPEs): Organitù dị ugbu a na-enye ndị ọrụ enyemaka ihe nchebe (PPEs) nke na-enyere ha aka n'ọrụ ahụ. Iji maa atụ, ọ bụrụ na onye ọrụ naanị ya na-arụ ọrụ metụtara ọkụ eletrik, nzukọ a ga-enye ha iko nchekwa, ọta ihu, okpu ndị siri ike, akpụkpọ ụkwụ nchekwa, mkpuchi mkpuchi na ngwa ọrụ nchekwa ndị ọzọ.
Nleta anya na oge ikwurita okwu: Ọ bụrụ na onye ọrụ naanị ya na-arụ ọrụ n’ebe dịpụrụ adịpụ, nzukọ na-eleta ha mgbe niile iji hụ ka ọ na-arụ ọrụ. N'otu aka ahụ, a na-eme mkparịta ụka kwa ụbọchị site na redio na ekwentị.
Mkpu mkpu mberede: Edebere ya na ogige nke nzukọ, onye ọrụ naanị ya nwere ike rụọ ọrụ a mgbe ọ na - enwe nsogbu ọ bụla.
Ihe Na-abụghị Okwu: Zọ ọzọ a na-ahụkarị bụ itinye akara aka na mpaghara ndị dị ize ndụ. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ala mmiri dị, enwere akara itinye ebe ahụ. Agbanyeghị, iji ihe ịrịba ama eme ihe n'ụzọ gabigara ókè na-eduga n'ihe ọghọm ebe ọrụ naanị adịghị na-aghọta ihe ọ pụtara. Ọ bụ ya mere nzukọ a ga-eji nye ha ezigbo ihe ọmụma banyere ihe ịrịba ama.
Usoro ịdọ aka ná ntị akpaaka: Ọ bụ sistemụ akpaka na-eziga ịdọ aka na ntị mgbe ọkụ ma ọ bụ mgbawa mere. Ọ bụ otu n'ime ngwaọrụ ndị a na-ahụkarị nke fọrọ nke nta ka nzukọ ọ bụla na-eji.
Nnyocha nke PET: Ọ bụ ihe nyocha ihe egwu na - enyere aka ịghọta ihe ọghọm metụtara ọrụ nke ndị ọrụ naanị ya. Nnyocha PET nwere ihe atọ, Ndị mmadụ, gburugburu na ọrụ.
ndị mmadụ: nzukọ ahụ ga-ahụrịrị akụkọ banyere ime ihe ike, iwe ma ọ bụ omume mpụ nke onye ọrụ naanị ya. ha nwere nsogbu ahụike ọ bụla? Ha ga-ahụrịrị ahụmịhe nke ịrụ ọrụ naanị.
Gburugburu: Na nzukọ ahụ ga -achọkwa ihe ga-etinye ya na gburugburu ebe obibi. Ekwentị na-arụ ọrụ ebe ndị ọrụ owu na-aga, ha na-arụ ọrụ n'ịdị elu na ihe ndị ọzọ metụtara gburugburu ebe obibi.
Ọrụ: kedu ihe ọghọm metụtara ọrụ nke ndị ọrụ naanị ya dịka ijikwa ego, ime iwu, iji kemịkalụ ma ọ bụ ọrụ ọzọ dị mgbagwoju anya.
Mgbe imechara ụlọ ọrụ nyocha a na-aga maka azịza ọgbara ọhụrụ dịka nke akọwara n'okpuru. iHelp bụ ngwugwu ngwungwu zuru oke nke nwere ike inyere nzukọ a aka ịnagide nsogbu ndị ọrụ na-eche ihu na-eche ihu.
Teknụzụ iji Gbalịa Ijikwa Ndị ọrụ Lone:
Ọ bụrụ na anyị hụrụ ka onye ọrụ naanị anyị achọghị ka onye ọ bụla lekọta ha, ha chọrọ ịnụ ụtọ nnwere onwe ha site na ịrụ ọrụ naanị ma n'otu oge ahụ, ha chọrọ nchekwa na nchekwa. Ile anya na uzu onodu a bu uzo ozo di nma karie usoro ntuziaka eji ugbua. Enyere otu ihe ga - enye site n'otu ihe bụ sistemụ ihe nke pụtụrụ ihe bụ ngwaọrụ ekwentị 3G kacha ntakịrị n'ụwa. Ọ bụ obere ngwaọrụ nke mere na ndị ọrụ naanị ya agaghị enwe nkụda mmụọ mgbe ha na-ebu ngwaọrụ ahụ. Ọ nwekwara GPS tracker nke na-eziga ọnọdụ niile na nzukọ ahụ. Ọ nwere usoro ịtụnanya dị mma nke dara ada nke ukwuu ma ọ bụrụ na mmadụ daa, ọ na-eziga ozi ahụ na akpaghị aka na ọgbakọ maka ime ihe ozugbo nke nwere ike ịchekwa ndụ onye ọrụ. Ewezuga nke ahụ nwere bọtịnụ dị na ngwaọrụ ahụ mgbe mmadụ nwere ihe egwu ọ bụla, ọ nwere ike pịa bọtịnụ ahụ ma ziga ọnọdụ ahụ na njikwa ahụ. Nkwukọrịta ya nke abụọ ga - enyere gị aka isoro ndị ọrụ owu na-akparịta oge ọ bụla ịchọrọ ma nwee ozi na - aga n'ihu.
Nzuzo 2799 19 Echiche Taa
Ngwongwo na akara osisi (1)